Yaa Is dhiibay farmaajo iyo Rooble ? | Dayniile.com
Home Warkii Yaa Is dhiibay farmaajo iyo Rooble ?
Si jawaab indho & dhago leh u helno waa in aan iswaydiinaa maxay ahaayeen qodobada laysku hayay ?
Koow kiiska ikraan waxa uu kulaabtay gacanta hay’adda NISA iyo hogaankeedii hore, ra’isul wasaare Rooblana waxa uu doonayay waxa ay ahayd in uu la wareego ama ka wareejiyo hogaanka NISA madaxdii hore taasoo ka dhigan in kiiska ikraan looga adkaaday Rooble ama uu si hoose uga siibtay isagu.
In kiiska ikraan loo daayo Caddaaladda waa wax lawada qabay, balse caddaladda waa caddaaladee ?
Wasiirka amniga oo ahaay farac ka dhashay khilaafka, sida saxda ah wasaaradda Amniga waa sida wasaaradda gaashaandhiga oo kale, waa mansab siyaasi ah oo lagu qurxiyo hanaanka xilalka ee 4.5 , balse majirto awood ay kuleedahay ciidamada dhaxdooda ama taliyayaal toos uga amar qaata. waana wasaarad ay yar tahay samaaynteeda oo rooble looga tanaasulay,
Inta kale waa hadal qurxin & xaalad uga gudub ah , balse waxaa xaqiiq ah in ra’isul wasaare rooble haleelin halkii uu u dagaalamay , ha uga haro tabar ama Talo ama Tasaariif tii ay noqotaba.
Waxaa kaloo xusid mudan in Rooble ka ogolaaday Laftagareen dhamaan qodobadii uu ka diiday Qoor Qoor Kuna colaadiyay, waxaana libinta helay reer koonfur galbeed & hogaankooda halka reer galmudug abaal looga dhigay kala qaybin & xaqiraad.
Garta lama galo kolkay kulushahay, waa hal hays soomaaliyeed,
Previous articleVilla Soomaaliya oo war ka soo saartay heshiiska ay gaareen Farmaajo iyo Rooble
Next articleQARDHO: BEEL KA HESHIISAY XUBINTA GOLAHA SHACABKA BAARLAMANKA SOOMAALIYA
Waxaa shalay magaalada Hague ee dalka Holland go’aankii ugu dambeeyay looga gaaray kiiska badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo kenya. Maxkamadda ugu sareysa ee Qaramada...